दलित वस्तिमा कांग्रेस वडाध्यक्षको धम्की,‘भोट दिएनौ भने पानी छुन दिन्न ’ « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » दलित वस्तिमा कांग्रेस वडाध्यक्षको धम्की,‘भोट दिएनौ भने पानी छुन दिन्न ’
दलित वस्तिमा कांग्रेस वडाध्यक्षको धम्की,‘भोट दिएनौ भने पानी छुन दिन्न ’
धादिङ । शुक्रबार साँझ करिब ७ बजेको थियो निर्वाचन आयोगले मौन समय तोकेको साँझ थियो । धादिङ ज्वालामुखी २ काफलपानीका पदम बहादुर वि.क घर सल्लाह गर्दै थिए । ‘छिर्के विर्के’ सर्ट लगाएका व्यक्ति एक अर्का सहयोगी सहित पदमबहादुरको घरमा प्रवेश गरे । कुनै औपचारिक कुराकानी शुरु नगर्दै उनले पदम बहादुर विककी श्रीमती दिलमाया विकलाइ चुरोट दिँदै भने भने,‘लौ चुरोट खाऊ ।’
अन्य समयमा बाटोमा जम्काभेट हुँदा समेत ‘बोल्दै नबोली’ हिँड्ने तर चुनाव लागेपछि दलिछको घर भित्र पसेर चुरोट बाँड्ने उनी थिए–ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई बाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रण बहादुर शाही । नेपाली कांग्रेसका पूर्व गाउँ सभापति समेत रहेका उनले आफू आउनुको कारण सुनाउँदै भोट माग्न थाले ।
‘अहिले भनेको वडामा सबै काम गर्ने मै हुँ । राहत दिने बेलामा सबै काम मैले गरेको छु । भोट दिनेबेलामा चाहीँ काठमाडौंबाट आएका केटाहरुले ड्यामका ड्याम हाल्ने ?’ उनले यसो भन्दै गर्दा छेउमै सुनिरहेकी पदम बहादुरकी कान्छी आमा ६० वर्षिय पुर्णमाया विक भन्दै थिइन्,‘केटाहरुले गरेको कुरा के भन्नु र बाबुसाहेब !’
पुर्णमायाको कुरा खस्न नपाउँदै उनी फेरी जंगिए,‘यसपाली त तिमीले नै भोट हाल्नु पर्छ ।’ पुर्णमायाले फेरी भनिन्,‘आफू जान्दिन ‘भूरा’ले कता हाल्दिन्छन् ।’
उनी फेरी जंगिदै जान थाले,‘काम गर्ने मान्छे पनि हेर्नु पर्यो नी । एकसुको काम नगर्ने भोट अन्तै दिएर के हुन्छ । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु ? यो शाही धारालाई हामीले ट्याङ्की बनाउन एक लाख हालिदिएका छौँ । यहाँ कामीहरुले पानी खान्छ । काम हामीले गर्ने, भोट अन्तै दिने ? भोट हामीलाई दिनुपर्छ । हामीले भनेको ठाउँमा दिनुपर्छ ।’
उनको यो भनाई धम्कीपूर्ण आसय सुनेपछि पूर्णमायाको थप जवाफ थियो,‘ ‘भूराले कता लगेर हाल्दिन्छन्, अहिले पनि कता लगेर हाल्दिन्छन् ।’
‘त्यसो भए काम पनि त्यही अनुसार हुन्छ । तिमीहरुको खानेपानी पनि बन्दैन । त्यो कुलोको पानी पनि टेक्न छुन पनि पाउँदैन,’ रण बहादुरको धम्की झन बढ्न थाल्यो,‘हामीले अहिलेसम्म केही भनेको छैन । त्यही हो भोट यसपाली कांग्रेसलाई दिनुपर्छ । शाही धारा(दलित बस्ती नजिकै रहेकाे धारा) मा ट्याङ्की बनाउने हो, कुलोको पानी चाहिने हो भने त्यही अनुसार काम गर्ने हेर । भा कुरो यथार्थ कुरो यसपाली पनि तिमीहरुले कुलोको पानी लोटाले उभाउन पाउँदैनौ । सिचाइ चाहियो, भैसीलाई पानी खुवाउनु पर्यो । आरानमा ‘पाइन’ (तातेको फलाममा हालिने पानी) हाल्न पर्यो भने पानी पाउँदैनौँ । कुरो त्यही हो ।’
उनले सिचाइ पाउँदैनस् भनेर धम्की दिए । तर, दलित वस्तिभन्दा माथि भएर बहने पानी मुहान नै रण बहादुरले आफ्नै खेतमा सिचाई गरेका छन् ।
तर, दलित बस्तीका एक जनाको पनि सिचाई छैन । यद्धपी उनले भोट नदिए पानी छुन नदिने धम्की दिए । यो वस्तिमा ९ घर दलित परिवार बसोबास गर्छन् । अशिक्षाको चपेटामा लामो समयदेखि गुजार्दै आएको यो वस्तिमा विकास वा समृद्धिको कुनै गुञ्जायस नै छैन ।
पदमबहादुरको दुई भाइ छोरा काठमाडौंमा बस्छन् । यता पूर्ण मायाँको छोराहरु पनि रोजगारी अभावकै कारण अरब तिर छन् । कान्छा छोरा यम बहादुर विकले गत स्थानिय निकायको निर्वाचनमा आमा अशक्त भएका कारण आमालाई भोट हाल्न सघाएका थिए । अहिलेको पुस्ता अलि शिक्षित भएका कारण उनी यो पुस्तासँग भोट माग्न सक्दैनन् । तर, बृद्ध बृद्धालाई भने धम्काउन छाड्दैनन् ।
‘हामीलाई धम्काएर भोट माग्नु भयो । रुखमा भोट नहाले पानी खान नदिनेरे,’ ३१ वर्षिय मिना विकले भनिन्,‘कुलोको पानी र धाराको पानी समेत नदिने कुरा गर्नु भयो ।’
को हुन् वडाध्यक्ष शाही ?
नेपाली कांग्रेसका पूर्व गाउँ सभापति रहेका रण बहादुर शाही गत स्थानिय निकायको निर्वाचनमा ज्वालामुखी दुई बाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी यसअघि नेपाली कांग्रेस गाउँ सभापति समेत थिए । वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि कांग्रेसको नेतृत्व उनैले गरिरहेका छन् ।
सामान्य परिवारमा जन्मेका उनले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेसँगै अकुत सम्पत्ति जोडेका थिए । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका २ समिटारमा उनको घर र व्यापार छ । उनले व्यापार र राजनीति दुवै गर्दै आएका छन् । मुलुकमा राजतन्त्रको समेत अन्त्य भएर गणतन्त्र आइसकेको छ । तर, यहाँ भने उनको ‘राजतन्त्रीय शैली’ कायम छ । उनलाई यहाँका स्थानियले समेत ‘साइला बाबु साहेब’ वा ‘साइला राजा’ भनेर सम्बोधन गर्छन् ।
भोट माग्ने उनको यो शैली नयाँ भने होइन । गाउँमै रहेको उनको किराना स्टोर छ आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएकाहरुले उनीसँग नगद दिएरै सामान किन्छन् । तर, न्युन आर्थिक अवस्था भएकाले भने उधारो खानु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा उनले आफूलाई भोट नदिए उधारो नदिने धम्की समेत दिने गर्थे । यसअघि वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा समेत उनले धम्काएरै चुनाव जितेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा मौन अवधिमा यस्ता गतिविधि गर्न नहुने जनाएको छ तर, यीनलाई निर्वाचन आचार संहिताको कुनै मतलबै छैन ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल मौन समयमा यस्तो गतिविधि हुनु निन्दाजनक रहेको बताउँछन् ।
‘यो अडियो मलाई पठाइदिनुस् म निर्वाचन आचार संहिता अनुसार जान्छु,’ ढकालले भने,‘प्रचलित कानुन अनुसार नै दलित भनेर विभेद गर्न त पाइँदैन नै,’ उनले भने,‘हाम्रो चासो भनेको मौन अवधिमा आचार संहिता तोडेको भन्ने नै पर्यो ।’
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on November 26, 2017 .
← दलित बस्तिका बासिन्दा भन्छन्- लालपूर्जा दिनेलाई भोट !	डुम बस्तीमा छैन चुनावको चर्चा →